प्रधानमन्त्री ओलीकाे चीन भ्रमणकाे जम्बो टोलीमा को-को छन् ? -
प्रधानमन्त्री ओलीकाे चीन भ्रमणकाे जम्बो टोलीमा को-को छन् ?
३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०८:३० 316 पटक हेरिएको
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिने औपचारिक भ्रमणमा चीन जान लागेका छन्।
प्रम ओलीको असार ५ देखि १० गते सम्म चीन भ्रमणकोकार्यक्रम तय भएको छ । चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङ्गको निमन्त्रणामा प्रम ओली चीन जान लागेको परराष्ट्र मन्त्रालले जनाएको छ। बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मिति घोषणा गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले बेइजिङ्मा नेपाल चीन बिजनेस फोरम र बिज्ञहरूलाई सम्बोधन गर्ने पनि कार्यक्रम छ । भ्रमणका क्रममा केही सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भनिए पनि बिस्तृतमा खुलाइएको छैन । स्वदेश फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्रीले तिब्बतको ल्हासामा प्रान्तीय अधिकारीसङ्ग पनि ओलीको भेटवार्ता हुने छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले खाेले एकवर्षे